5 makuru madingindira eiyo LXDE desktop | Linux Vakapindwa muropa
Gnome uye KDE ndiwo madhesiki esarudzo kune vashandisi vane makomputa ane zviwanikwa zvakawanda, asi ichokwadi kuti havazi vese vane zviwanikwa zvakawanda uye havasarudze aya madhiketi emakomputa avo.
Imwe yeanofarira zviwanikwa-mashoma komputa desktops ndeye Lxde, iyo OpenBox-based desktop iyo inogona kugadziriswa. Pazasi pako isu tinoratidza mishanu misoro yeLxde desktop iyo yatinogona kuisa nekushandisa.
2 Ruvara rweUI
6 Ndeipi theme yeLxde yandinosarudza?
Dhizaini dhizaini inowanzo kuve inofarirwa nevazhinji vashandisi. Iyi theme yedesktop inoshandisa iyo theme yeNumix yakashandurwa kuti ive OpenSUSE mavaraNdiko kuti, ruvara rwegirini. Inoratidzwa mu OpenSUSE neLxde asi isu tinogona isai mune chero kugoverwa neLxde.
Ruvara rweUI Iyo theme ine dhizaini dhizaini, asi isina kunyanyisa kuwedzerwa. Ruvara rwakazara patafura iyi asi hazvireve kuti zvakashata, kure nazvo. Kunaani vakasangana neGnome yekare, iyi theme yedesktop inotiyeuchidza zvakawanda nezvekuonekwa kwedesktop iri, asi yakashandurwa kune iyo Lxde desktop.
Dzinofanira iri desktop theme iyo inotiyeuchidza nezveElementary mifananidzo uye zvirokwazvo macOS. Iyi theme yeLxde desktop ndeye yakachena tema ine yakanatswa mafonti ayo anotiyeuchidza zvakawanda nezve minimalist theme kupfuura yemusoro wakashongedzwa theme.
Iyo desktop theme ine mavara akanaka kwazvo asi monochrome desktop madhisiki akangofanana. Atom iwo musoro weiyo Lxde desktop iyo inoshandura iyo desktop kuita dema uye chena nharaunda.
Lxde inoshandiswa nevakawanda seyoushamwari desktop kune avo vanobva kuWindows uye vanoda kushandisa Gnu / Linux. Musoro wenyaya WinAte iko kuchinjiswa kwezvinhu zvese kuti Lxde itaridzike senge mushanduro yeWindows. Ehezve, isu tinongova nechitarisiko chavo.
Ndeipi theme yeLxde yandinosarudza?
Aya ndiwo mamwe emadhodhi akanakisa edesktop atinogona kuwana yeLxde desktop asi havasi ivo voga. Ini pachangu ndinofarira iyo Atolm theme, asi zvakare ichokwadi kuti kune vanoda mafirati dhizaini, yakadai theme haina kunaka. Izvo zvese zvinoenderana nezvinodiwa, asi Aya mashanu madesktop madhesiki akanaka zvakakwana kuti titange kugadzirisa yedu Lxde.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Desks » 5 makuru madingindira eiyo LXDE desktop
Iyo raspbian yashaikwa!
Manuel Chavez Bejar akadaro
MHORO ZVAKadaro, Shamwari dzelinux Ini ndatova nenguva ndichishandisa ubuntu uye lubuntu iyi ubuntu distro Ini ndakangoiisa pane yangu pc nenzira iyo inoshanda seyechirango. Asi zvese pazvinoitika, vanhu vane chinzvimbo vanopedzisira vabira zvinhu zvakanaka uye ini ndotaura izvi nekuti ndinonzwisisa kuti software iyi yakavhurika sosi uye ikozvino zvandakaedza kutsvaga dingindira repc yangu hapana. Iwo ese madingindira eUbuntu uye ayo distro ari pamafolda, uye mamwe akavanzwa, chete chinongedzo chinoonekwa uye kana iwe uchida kurodha pasi, hazvizivikanwe kuti rudzii rwemusoro wenyaya, uye kurodha pasi iwe unofanirwa kunyoresa. Zvakanaka mukomana ndewokuti kana software iyi iri yemahara uye nenyaya dzacho kuti sei dzakabiwa, hazvina kunaka, zvirongwa zveakavhurika izvi zvinofanirwa kunge zviri mahara mune zvese zvaro kune avo vese vanoda kuishandisa, ive nayo pamakomputa avo zvachose. .. ..
Pindura kuna Manuel Chávez Béjar